ODOO: OpenSource ERP nke n’enye ihe aga-ekwu! | Site na Linux
ODOO: OpenSource ERP nke n’enye ihe aga-ekwu!
Ogbodo 210 | | Aplicaciones
Odoo bụ a usoro nhazi ngwa ngwa ngwa ọrụ na-akpọbu OpenERP (maka aha ya na Bekee, Enterprise Resource Planning), aha gbanwere bụ n'ihi na ọ bụ na ụdị ya 8.0 Odoo na-agbanwe ma gafere ịbụ usoro ERP ebe ọ bụ na agbakwunyela ọrụ na-atọ ụtọ ma bara uru na ọrụ dị ka ngwa ma ọ bụ blọọgụ, ya bụ, na-enweghị mkpa ka ERP na-achịkwa ya (agbanyeghị ọ na-aga n'ihu ịhapụ ndị ọrụ ya ka ha gaa n'ihu na-eme ya).
Ọ bụ ya mere ndị nwe ya ji kpebie itinye atụmatụ Branding ma wezuga onwe ha ntakịrị site na ndepụta okwu "ERP" ebe ọ bụ na mbipụta ọhụrụ a Odoo kpuchiri ubi ndị ọzọ, ihe ọ na-enweghị usoro ERP ọzọ rụzuru; na-aghọ n'ụzọ dị otú a "A Suite ma ọ bụ set nke ngwa" dịka ha si akọwa ya ugbu a.
N'ezie, ha na-ekwusi ike na "oes" abụọ ahụ n'usoro nwere njikọ chiri anya na ụlọ ọrụ kọmputa na-aga nke ọma dị ka: Google, Facebook ma ọ bụ Yahoo. Lee nnukwu ọrụ nyocha nyocha ndị otu Odoo mere!
Olee ngwá ọrụ ndị ọ na-enye anyị?
Ugbu a, anyị na-aga akụkụ kachasị mma, Odoo bụ otu n'ime usoro kachasị mma n'ahịa iji jikwaa ụlọ ọrụ kemgbe a haziri arụmọrụ ya site na modul usoro azụmaahịa (N'oge a enwere modulu karịrị 500 na-eri nri, ma na-ahazi ya n'asụsụ Python) nke n'aka nke ya jikọrọ ibe ya site na ijikọta usoro ndị a niile na etiti ha n'otu ngwa iji zere mbiputegharị data na-akpata njehie n'ọtụtụ ERP.
N'ozuzu ya na-enye anyị ohere:
Nchịkwa zuru ezu nke ebuka, ụlọ nkwakọba ihe na ngwa ahịa.
Nhazi oru na oru.
Nchịkwa ahịa na akwụkwọ ọnụahịa.
Nyocha gbasara nyocha na njikwa ọrụ.
Atụmatụ / imezu iwu ọrụ.
Njikwa usoro na-arụpụta ihe maka imepụta ihe.
Ahịa metụtara ndị ahịa.
Nchịkwa ego: nchịkọta na ịkwụ ụgwọ.
Nchịkwa nke ndị ọrụ ụlọ ọrụ.
Ma nke a ka ịkpọ aha ngwaọrụ ole na ole!
Modfọdụ modulu Odoo
Ke ofụri ofụri, usoro ije bụ ahịa / nkesa na ọdabara na Linux na Windows, n'ụzọ dị otú a niile ọrụ nwere ike na-arụ ọrụ na otu data repository. Site na nsụgharị ọhụrụ Odoo wee jiri ya Launchpad (bzr) a Github na-enweta nke a nnukwu mmelite na nbudata nke koodu.
Uru oru ozo bu na onye ahia nwere ike iji Odoo site na ihe nchọgharị obula, ma site na a desktọọpụ kọmputa, laptọọpụ ma ọ bụ mbadamba, na ebe obula n ’uwa. O nwekwara nlele ntanetị dị mfe, mana yana ọrụ niile dị na echiche zuru oke, emeziri maka ama ama ama. Niile ị chọrọ bụ ezigbo njikọ internetntanetị.
N'oge mgbanwe nke ihe nkesa data-ahịa, enwere ike ime ya site na iji XML, Net-RCP na JSON.
Uru nke usoro Odoo
Nnwere onwe iji ya na redistribution.
Nnwere onwe teknụzụ.
Nkwalite nke asọmpi efu.
Ogologo oge nkwado na ndakọrịta.
Mgbazi ọsọ ọsọ na ịrụ ọrụ nke ọma.
Zọ dị mfe ma dịrị n'otu nke njikwa ngwanrọ.
Yabụ ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịhazi azụmahịa gị Odoo bu ezigbo nhọrọ n'ihi na nke ị ga-akwụ ụgwọ nke ukwuu obere ekele ya mmepe na ụwa nke free software.
Maka ozi ndị ọzọ ị nwere ike ịkpọtụrụ nke a njikọ.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnwale ya, lee nke gị repository na GitHub.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » ODOO: OpenSource ERP nke n’enye ihe aga-ekwu!
Otu obi abụọ, m na-elele ọrụ ahụ na GitHub yana ibe ya yana dịka ọ na-ekwu ebe a ọrụ a na-eji eke. Ma olee ụdị eke, ọ bụ mgbe niile ka m mara na eke na-ede ederede, mana ahụla m ọtụtụ ọrụ na palọ web ma mana m chọọ nke ahụ, m ga-enweta Django, nke mgbe m hụrụ ya (wee hụ nkuzi nkuzi) bụ otu ụzọ (otu blog ma ọ bụ nzukọ) Anaghịdị m echeta). Agbanyeghị m na-ekwu ya n'ihi na achọrọ m iji ihe maka web na-abụghị Php, mana nke ahụ mara mma ma na ọ dị oke mma yana na ọ na-arụ ọrụ ma dị ike. Nke ahụ bụ ebe okwu m si abịa kemgbe m jiri C # na ASP.NEt mana achọrọ m ịgbanwe mgbe niile, ọ bụrụ na mmadụ nwere ike ịza m, m ga-enwe ekele dị ukwuu.
Amaghị m n'ezie ihe ị na-ekwu mgbe ị jụrụ ụdị eke ọ bụ, Django bụ onye ama ama ịzụlite mana na njedebe ị mụtara iji Django ka ọ ghara ịhazi mmemme na eke.
Nke a bụ ntakịrị ihe ọmụma
Julio Saldivar kwuru dijo
Ekwadoro m Web2py maka mmemme weebụ, ọ bụ usoro weebụ Python dị ka Django mana ọ ga-eme ka usoro mmụta ahụ belata.
Akwụkwọ ndekọ aha gị na Spanish:
Ugbu a maka mmemme a na-atụ aro ya nke ukwuu iji ntọala na-enyere gị aka ịme mmepe na ngwa ngwa ma na-egbu maramara.
Zaghachi Julio Saldivar
Oscar Javier dijo
Ndewo Enyi Alejandro na ị nwere nnwere onwe iji mee modulu na eke ma gbanwee ha maka mkpa gị, ị nwere uru na ọghọm ya n'otu oge dị ka sistemụ ọ bụla, enwere m ike ịgwa gị na otu nkwekọrịta bụ na nnabata a na-enye mfe php apụtaghị na abanyela na phyton ọ nwere ike ịbụ na ị na-ekwu okwu ọnụ karịa dollar ma ọ bụ ego ị na-arụ, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịma ihe odoo dị na njikọ ọ dị ka ịnwe injin sistemụ nke dị njikere maka gị iji ya ma wụnye modulu ma gbanwee ha wordpress ụdị.
Ajụjụ ọ bụla m hapụrụ gị email m kajje69@gmail.com
Zaghachi Oscar javier
Ọ bụrụ na mmadụ nwere mmasị na Open Source ERP ha nwere ụzọ ọzọ dị ike http://www.tryton.orgN'uche m, nsogbu kachasị na Odoo bụ ịkwaga na nsụgharị ọhụrụ ebe ọ bụ na ị ga-agafe na ndenye ọpụpụ ọbụna karị ma ọ bụrụ na ịnwere modulu ịkwaga.
Ọ bụ eziokwu na mmalite nke Odoo dị mma, ọ bụ ezie na m ka na-ahụ oke mgbagwoju anya na ihu, gafee dashboard. Ma hey, nke m bụ echiche nwere mmasị, ebe m bụ onye okike nke FacturaScripts, yana "karịa ma ọ bụ obere" asọmpi 😀
Ọzọ bụ webERP, njikwa azụmahịa na usoro nyocha nke chọrọ naanị ihe nchọgharị weebụ na onye na-agụ PDF iji mee ihe. Kpamkpam LAMP (Linux, Apache, MySQL, na PHP), ọ dị ezigbo ike mana na-erepịakwa ihe ole na ole. http://www.weberp.org/
Nhọrọ dị oke mma, amalitere m iji ya ma ọ dị ka ike.
Zaghachi ka Ọbịa
Na POS POS maka ụlọ ahịa anụ ahụ na-arụkọ ọrụ na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. Kedu ka Odoo si dị? Ọzọ ọzọ? Prestashop na-enyekwa ya naanị na ịchọrọ mgbakwunye mgbakwunye maka ụlọ ahịa anụ ahụ POS ...
Ebee ka m ga-esi nweta koodu isi iji mụọ ya?
Nke a na - enyere aka n'efu ma ọ bụ kwụọ ụgwọ ma ọ bụ bụrụ ngwakọ, kedụ mgbe ọ ga - akwụ ụgwọ ka ọ ga - akwụ onye ọrụ ọ bụla? Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ m pere mpe, ego ole ka ị kwụrụ, ọ bụrụ na ọ dị ọkara ma ọ bụ buru ibu, biko gwa m ọnụahịa ndị ikwu
Ndewo William, ERP a nwere ụdị nke obodo ya nke mepere emepe ma nwee ụdị ọrụ ya (na mgbakwunye SAAs nke igwe ojii), zitere m email admin@desdelinux.net ma ọ bụ dee m na WhatsApp +51994867746 na m nwere ike ịdụ gị ọdụ n'ụzọ zuru ezu iji mejuputa ya na ụlọ ọrụ gị
Mario rodriguez dijo
Obi abụọ adịghị ya na Odoo bụ sistem dị ike, ana m elele ọkwa a ma ọ bara ezigbo uru, mgbe site na Linux, echere m na ọ bụ ọkacha mmasị m nke abụọ… ha anaghị emelite ọtụtụ, ee, mana ọ bụ ọdịnaya dị mma.
Zaghachi Mario Rodriguez
Javier Montenegro dijo
Agbagoro m data m si na mbu nke odoo gaa na nke ọhụrụ, ya na ụlọ ọrụ MiTSoftware, ọ nweghị data fọdụrụ, ma ugbu a, ana m arụ ọrụ nke ọma karịa nke ọhụrụ ahụ.
Zaghachi Javier Montenegro
Ọchịchị Russia weere ịgbanwee Linux
Emepela ihe ohuru OpenShot 2.0